यौन तथा बलात्कारजन्य घटनामा को दोषी ? - प्रभात खबर
यौन तथा बलात्कारजन्य घटनामा को दोषी ?
प्रभात खबर २७ माघ २०७७, मंगलवार १८:२८ मा प्रकाशित
इटहरी , माघ२७ ।
विगत केहि वर्षदेखि नेपालमा यौनहिंसा तथा बलात्कार जस्ता अपराधिक घटनाहरु दिन प्रतिदिन मिडियामा छ्यापछ्याप्ती आइरहेका छन् । यी यस्ता घट्ना यसभन्दा अगाडि भएका थिएनन् भन्न सकिदैन् । यस्ता घट्ना अगाडि पनि थिए भन्ने कुरा अहिले प्रष्ट उजागर हुन्छ । तर पहिले किन यस्ता घट्ना समाजमा बाहिर आएनन भन्ने प्रश्न सबैमा आउनु स्वभाविक हो । पहिला यस्ता अपराधिक घट्ना अनि बाहिर नआउनुमा समाजको चलिआएको मान्यता त्यसमा पनि यौन जस्तो सम्बेदनशील कुरा अनि यौन हिंसा खप्ने मानै समाजले देख्ने कुदृष्टि भाव नै हो । यसमा अरु केहि भनिरहनु पर्दैन् । पहिलेको समयमा यस्ता घट्ना घटेमा स्वंम महिलालाई आरोप लगाउने, वेश्या, र……डी जस्ता अपशब्दहरुले महिलालाई नै दोष लगाउने भएकाले उनीहरुले यस्ता समस्या खपेर पनि बाहिर ल्याउन सकेनन् । बाहिर ल्याए आफै फोहोरी हो भन्ने गलत मान्यताले गर्दा ।तर अहिले समय यसरी परिवर्तन भयो कि विश्वयापी प्रविधिको द्रुत विकास र पहुँचले गर्दा हरेक व्यक्ति पत्रकार, हर कोहि सुचना सम्प्रेषण गर्न सक्ने भए । घट्ना घटेको केहि सेकेण्डमै विश्वको हर कुनामा खबर पुग्ने नै भयो । यो एउटा ठुलो परिवर्तन हो र यसले समाजका गलत घट्नालाई छिटो बाहिर ल्याई दिएको छ । अझै पनि मिडियाको पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा कति घट्ना समाजको डरले लुकछोप भइरहेको होला, कति महिला दिदि बहिनीले पिडा खप्नुपरेको होला । कठै ।
यसरी मिडियाको पहुँच भएर बाहिर आउँदा आउँदै पनि किन यस्ता घट्ना झन बढिरहेको छ त ? मिडियाले बाहिर ल्याउँछ भन्ने डर किन नभएको हो त ? यस विषयमा किन सबैको ध्यान जान सकिरहेको छैन् ? अर्को कुरा यस्ता घट्ना घट्न किन दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ? यौनजन्य घट्ना घट्नुमा दोष कस्को छ ? भनेर किन अध्ययन गर्न सकिरहेका छैनन् हाम्रा देशका विज्ञ, ज्ञानी, बुद्धिजीविहरु तथा न्यायलयमा बस्ने न्यायमुक्तिहरु । किन न्यायमुक्तिहरु मुक्ति जस्तो भएर बसेका, यो अच्मम लाग्दो कुरा हो । उनीहरु किन विषयको गहिराइमा जान खोज्दैनन्, मात्र न्याय मात्रको कुरा गर्छन् ? यसले त रोग मात्र दब्छ, निको हुदैन् भन्ने किन नबुझेका । सामाजिक संजालको प्रयोगले घट्ना बाहिर त आउलान् तर यो घट्ना किन घट्छन् ? यसको कारक तत्व चाहि के हो, पहिला त्यो बुझौँ । हाम्रो समाजमा पुलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग अनि समलिङ्ग गरि बनेको शारिरिक बनोट छ । प्रत्येकको शरिरको बनावट, मनको स्वभाव फरक फरक हुन्छ । यो हाम्रो हाम्रो लागि अदभुत रहस्य हो । अहिले यो रहस्य पट्टी नजाँउ । कुनै दिन चर्चा गरौँला ।
प्रकृति या परमात्माको लिला यस्तो छ कि हरेक विपरित लिङ्ग प्रति आकर्षण हुन्छ । यो विश्वव्यापी सत्य हो । तर यो आकर्षण शरिर र मनको हो भन्ने हामीले बुुझ्नुपर्छ । यो आकर्षण नकारात्मक भयो भने विनाश या गलत कर्म निश्चित छ । यसमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने मन नै हो । यो शक्तिशाली मन जसलार्ई ठेगानमा लगाउन सकिएन भने यसले सत्यानाश गर्छ । त्यो सुक्ष्म मनलाई नबुझ्नुनै यौनजन्य घट्नाको जड पनि हो ।
बलात्कारजन्य अपराधमा प्रविधि र फेसनको अहम भुमिका ः
यौनजन्य घट्ना घट्नुमा धेरै कुराहरुले भुमिका खेलेको हुन्छ तर हामी सतही मात्र हेर्ने गर्छौ । बोक्रो हेरेर गुदिको रहस्य जान्न सकिदैन् । समाजमा यौनजन्य तथा बलात्कार जन्य घट्नामा अहिलेको खानपिन, मनोरन्जनको नाममा अत्याधिक अश्लिल सामग्री भएका फिल्म, आधुनिकता र फेसनको नाममा चलेको अर्धनग्नपना अनि प्रविधिमा अत्याधिक मात्रामा अश्लिल सामग्री आदि हुन् । यी माथिका जड भन्न केहि हिचकिचाउनु पर्दैन । हाम्रो मनोरन्जनको लागि खाने भनेको नै पानीपुरी अनि चटपट्टे तथा अत्याधिक मात्रामा जंकफुडको सेवन । क्या गजब छ, चटपट्टे खाओ मनलाई छट्पट्टी बनाउ । चटपट्टे पानीपुुरी, मनमा अाँधिबेरी । यस्ता खानेकुराले हाम्रो हर्मोनलाई डिसब्यालन्स गराउँछ । हामीले हेर्ने अधिकांश फिल्ममा यौनजन्य प्रस्तुति हुन्छ नै, तपाई भन्नु होला, यो हेर्नेको मनमा भर पर्छ । फिल्ममा त्यसता कुकृत्य गर्नेलाई मारिएको नि हुन्छ नि, किन उसले त्यो चाहि हेरेन ? बुझेन् ? हाम्रो मनको स्वभाव भनेको राक्षस छ पहिला विगार्न तम्सीन्छ, गलत प्रति आकर्षण बढ्छ । यसको तपाई स्वंम अनुभवी हुनुहुन्छ । फिल्म नै यसरी बनाको हुन्छ कि जुन हामीलाई के मन पर्छ भनेर । हाम्रो मनोविज्ञानलाई बुझेर कथा निमार्ण गरेको हुन्छ । समाजको अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बनाएको हुन्छ । त्यति गरेन भने फिल्म चल्नुप¥यो नि त । अहिले साहित्य र ज्ञानमुलक फिल्म बन्न छाडिसके । किनकि मान्छेको चाहना त्यसतर्फ घट्दै गएको देखिन्छ । अर्को कुरा अधिकाशं मान्छे सेक्स स्टेजमा ।नै हुन्छ, त्यहि रहन्छ अनि त्यहिबाट उठ्न नपाई मर्छ । उसको चिन्तन भोग बिलासमानै रहन्छ भनेर अध्यात्मीक साधक तथा योगीहरु बताउँछन् । के हामी कहिल्यै सोच्छौ भोग बिलासबाट पर पनि केहि छ है भनेर ? अर्को बजारको फेसनेबल प्रवृतिले पनि यौनहिंसा बढाउने गरेको छ भनेर भन्न डराउनुपर्दैन् । आधुनिकता र वैज्ञानिकताको नाममा बजारमा पाइने फेसनका कपडा, जसले शरिरलाई अर्धनग्न राख्छ । यो फेसन फेसनका चाहनाले यौनहिंसालाई प्रसय दिने गरेको छ । सबै युवा युवतीले यी प्रश्न चिन्तन गर्नुहोला, अहिले आधुनिकता र फेसनको नाममा अश्लिलता र अर्धनग्नता किन बिक्छ ? अनलाइन मिडियामा यो समग्री हेर्ने किन धेरै छन् । किन पहिला आँखा त्यसमै पुग्छ ? कानले त्यहि सुन्न खोज्छ ? साथिसंग बोल्नुपर्दा त्यसतै कुरामा मन जान्छ ? यहाँ यति ज्ञान, विज्ञान, दर्शन र कलाको अथाह भण्डार छ, किन मन त्यता थोरैको मात्र जान्छ ? कसैको बयान गर्दा रुपको मात्र बयान हुन्छ, यसले वासनालाई प्राथमिकता दिन्छ भनेर किन सोचिदैन ? एकपटक आफैलाई सोध्नुहोस । मैले धेरै मान्छेले भन्ने गरेको सुनेको छु । यदि व्यापार गरेर पैसा कमाउनु छ भने राम्री केटी फेसनमा रमाउनेलाई राख, ताकि उसलाई हेर्न भनेर पनि ग्राहक आउन । अरु पनि राम्री केटी, राम्रो रक्सी, राम्रो मासु जे पनि बिक्छ रे । यसले के सन्देश दिन्छ । कृपया अन्यथा नहोस यो मैले सुनेका कुरालाई उतारेको हुँ यसमा मेरो कुनै पुवाग्रह छैन् ।
प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको समयमा यसको उपयोग भने सहि ठाँउमा प्रयोग हुन सकेको छैन् । यसको उपयोग भने सहि ठाँउमा प्रयोग हुन सकेको छैन् । अहिले ७०–८० प्रतिशत जनसङख्या कुनै न कुनै अश्लिल सामग्री हेर्छन् यो दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । यसमा पनि १८ देखि मुनिका युवा युवतीको आकर्षण बढ्दो छ । युट्युब र गुगलका भित्तामा सर्च हुने अधिकाशं भनेकै भर्गल÷अश्लिल सामग्री हुन् जसले चेतनालाई गिराउँछ । विडम्बना के छ भने, एउटा गुरुले दिएको हजारै प्रवचन मध्ये सेक्स थम्नेल भका प्रवचनमा ज्यादा ट्राफिक हुन्छ । यसबाट मान्छेको स्वभावलाई बुझन सकिन्छ । प्रविधिमा यति धेरै ज्ञान, विज्ञान, दर्शन हुदाँ हुँदै पनि किन अश्लिलता बिक्छ ? मानिसहरु किन अश्लिल तथा अनावश्यक सामग्री प्रति मग्न छन् ? किन उसले पहिला अश्लिल सामग्रीनै उठाउछ ? यसतर्फ मान्छेको मनोविज्ञानलाई केलाउन जरुरी छ । हो, सेक्स द्यबकष्अ ल्भभमक हो । तर ऋयmउगकियचथ हैन् । यो आवश्यक छ तर यसलाई किन बजार बनाइयो ? समाजले यौनलाई एक पति पत्नी बिचमा सिमित राख्न बैबाहिक संस्था÷ प्रथा चलाएको थियो तर अब यो रहेन् । एकदिन सेक्स हरकोहि (मान्छे या जनावर) संग हुनेछ र बिबाह पनि समाप्त हुनेछ यसमा दुई मत छैन् । यो केहि विदेशी मुलुकमा सुरु भइसकेको छ । मान्छेको मनको स्वभाव यस्तो छ, जुन कुरा जति हेर्न, जान्न खोजो त्यति उत्सुक हुन्छ । यसको उल्टो जति टाढा गयो त्यति पर जान्छ । यहि हो ीबध या ब्ततचबअतष्यल को नियम । यहि हो प्रकृतिको गुप्त रहस्य । जानौ यसलाई ।
यस्ता घटनालाई नियन्त्रणमा ल्याउन के गर्नुपर्ला ः
यो एउटा प्राकृतिक हो तर जब प्रकृति भन्दा पर हुन्छ तब विकृति हुन्छ । शरिरको अङ्गबिचको देखिएता पनि यसको प्रमुख जड मन हो । वैज्ञानिक भाषामा भन्ने हो भने हर्मोनको प्रभाव हो । हरेक कार्य, घट्ना भौतिक रुपमा साकार हुनु अगाडि पहिला मनमा हुनुपर्छ । मन निश्किृय छ भने कुनै कार्य हुन सक्दैन् । तर यो मन यति शक्तिशाली अनि चन्चल छ, जसलाई सहि ठाँउमा एकाग्रता कायम गर्न सकिएन भने यसले कुकृत्य गर्छ । तर मन गलत ठाँउमा छिटो एकाग्र हुन्छ । हामीले यसलाई बुझ्न जरुरी छ । मनलाई बसमा ल्याउन पक्कै सजिलो छैन् । जब मनमा विचार खेल्न थाल्छ, भावनाको बाढि आउँछ तब त्यसै अनुसारको हर्मोन जेनेरेट हुन्छ । त्यो सकारात्मक भएमा उसले उत्कृष्ट कार्य गर्छ भने नकारात्मक भएमा नराम्रो काम गर्छ । अथवा त्यो हर्मोनलाई ब्यालेन्स गर्न नसकेर उसले हिंसा गर्नपुग्छ । अब के यो गर्नमा उसको मात्र भुमिका होला त ? प्रत्यक्ष हेर्दा एक÷दुई जना, जो प्रत्यक्ष घटनामा सामेल छ । तर खोज्दै जाँदा समाजका सबै क्षेत्र दोषि छन् । यसको लामो चेन भेटिन्छ ।
यौनजन्य तथा बलात्कार यो नितान्त मानसिक उथलपुथलले गर्दा हुने हुनाले पहिलो त मन के हो ? बुझ्नुपर्छ । मनलाई बुझ्न सके भावनालाई बुझ्न सकिन्छ । म भन्ने गर्छु, मनलाई आर्यघाट पु¥याउ, जुनदिन यो राक्षस मनलाई आर्यघाट पु¥याउछौ, त्यसपछि पवित्रता सुरु हुन्छ, असली स्वरुप सुरु हुन्छ । तर अहिले बजारीकरणको दुनियामा अगाडि भनेका दोषजन्य कुराहरु त हट्दैन् । किनकि मान्छे यसमा अभ्यस्त हुदै गइरहेको छ । हामीले मान्छेलाई मन के हो भनेर बुझाउन सक्यौ भने केहि हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ, मान्छे अहिले शिक्षीत छन् यति बुझ्न सक्ने भएका छन् । अनि मनलाई नियन्त्रणमा ल्याउन आफुले जानेको आध्यात्मिक साधना गर्न जरुरी छ । साधनाले रुपान्तरण गछर्, कसो मनलाई नियन्त्रण नगर्ला । अध्यात्मले म को खोज गराउछ, कन्सियस बनाउँछ । तर सबैले साधना गर्न नसक्लान, नगर्लान् । त्यो स्वभाव पनि हुदैन् । उनीहरुले चाहि के गर्ने त ? त्यसमा हामीले विचार गर्न जरुरी छ । साथै केहि महिला दिदिबहिनीहरु जो विदेशमा शरिर बेचेर आयआर्जन गरिरहेका होलान । त्यसमा रहर होला कि बाध्यताले हो !रहरले त शरिर बेच्छन जस्तो लाग्दैन् तर पनि रहरलेनै हो भने उनीहरुलाई सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएर रेड एरिया छुट्याई इज्जतसाथ गर्न दिनुपर्छ । अनि केहि हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ । यी गर्नु अगाडि पहिला गतिलो कानुनको जरुरी छ, त्यसपछि मात्र अरु उपाय । नत्र justice for Nirmala Pant/ Justice for Bhagirathi भन्दै चिच्याएर केहि अर्थ हुदैन । मेरो अन्तिम भनाई नै हो Justice for mind (मनलाई न्याय दे) । यदि कसैले कुकृत्य गरो भने कानुनले यसलाई हदसम्मको सजाय दिनुपर्छ यसमा दुई मत छैन् तर किन गल्ती गरो भनेर गहिरो अध्ययन नगरि पाप पनि बढ्दै जान्छ सजाय दिदै गरौला भनेर यसरी नै चल्ने हो भनेर सोच्दा समस्या कहिल्यै हल हुदैन् । अत हिजो justice for Nirmala Pant भन्दै हिड्ने मध्येको एक रहेछ भगिरथिलाई बलात्कार गर्ने भने के भन्ने ? त्यस्तै भोली justice for Bhagirathi भन्दै न्यायको चित्कार गाँउने कसैले भोली यस्तै कुकृत्य गर्यो भने के भन्ने ? कसलाई दोष दिने ?
(लेखकको अनुभुतीलाई जस्ताको त्यस्तै कपी गरिएको)